सञ्चारिका समूहद्वारा चार पत्रकार पुरस्कृत |
सञ्चारिका समूहद्वारा चार पत्रकार पुरस्कृत
प्रकाशित मिति :2019-09-12 19:37:21
ललितपुर । सञ्चारिका समूह नेपालले चार पत्रकारलाई पुरस्कृत गरेको छ । संस्थाको २३ औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन कार्यक्रममा पत्रकारलाई पुरस्कृत गरिएको हो ।
सञ्चारिका समूह नेपालद्वारा स्थापित ‘सञ्चारिका समानता पुरस्कार २०७५’ पत्रकारद्वारा हिमाल खबर पत्रिकामा कार्यरत रामु सापकोटा पुरस्कृत भए । हिमाल खबर पत्रिकामा प्रकाशित ‘मातृमृत्यु नघट्नुको कारण गुणस्तरहीन ‘अक्सिटोसिन’ पनि’ फिचरका लागि सापकोटा पुरस्कृत भएका हुन् । पुरस्कारको राशि १५ हजार (पन्ध्र हजार) रुपैयाँ रहेको छ ।
यसैगरी ‘स्व. उमा सिंह पत्रकारिता पुरस्कार २०७५’ बाट पत्रकार माधुरी महतो पुरस्कृत भइन् । पत्रकार महतो वीरगञ्जबाट बीबीसी नेपाली सेवामा कार्यरत छन् । यो पुरस्कार स्व. पत्रकार उमा सिंहको नाममा स्थापना गरिएको हो । उक्त पुरस्कार महिला पत्रकारलाई पेशामा थप उत्साह बढाउनका लागि प्रदान गरिन्छ । २०६६ सालमा स्थापना गरिएको उक्त पुरस्कारको राशि रू. ७ हजार १ सय ११ रहेको छ ।
यसैगरी ‘सञ्चारिका प्रोत्साहन पुरस्कार २०७५’ बाट सुष्मा बराइली र पार्वती थापामगर पुरस्कृत भएका छन् । पत्रकार सुष्मा बराइली हिमाल खबरपत्रिकामा र पार्वती थापामगर हिमालय टाइम्समा कार्यरत छन् । छोटो अवधिमा सक्रिय भई पत्रकारिता गर्ने पत्रकार महिलालाई पेशामा थप उत्साह बढाउन सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले २०६२ सालमा ‘सञ्चारिका प्रोत्साहन पुरस्कार’ स्थापना गरिएको सञ्चारिकाका अध्यक्ष नितु पण्डितले जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले पुरस्कार प्रदान गरेका थिए । कार्यक्रममा पुरस्कृत पत्रकारहरुलाई शुभकामना दिँदै सभामुख महराले अझ सशक्त र निष्पक्ष रुपमा समाजका कुराहरु लेख्न अनुरोध गरे ।